अचम्मको भेट | eBachan Nepali Christian Magazine
गत हप्ताको कुरा हो एकजना पास्टर मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दै थिए । त्यस क्रममा बाटोमा उनले एकजना वृद्ध मानिसलाई देखे, त्यसपछि दया लागेर त्यस वृद्ध मानिसलाई बाइकको पछाडिको लिफ्टमा बसाए । जब उनीहरु मोटरसाइकलमा गइरहेका थिए, तब ती वृद्ध मानिसले भने, मेरो छोरा; गत रात स्वर्गमा के भयो तिमीलाई थाहा छ ? ती वृद्ध मानिसको यस्तो कुरा सुनेर पास्टर डराए, अनि तुरुन्तै मोटरसाइकल रोकेर भने, ‘सर तपाईं त निदाइरहनुभएको छ कि के हो ? तपाईंले कसरी स्वर्गको जानकारी पाउनुभयो ?’
ती वृद्ध मानिसले भने, गत रात परमेश्वर पृथ्वीका मानिसहरुसँग साह्रै रिसाउनुभयो र स्वर्गदूतहरुलाई तुरही फुक भन्नुभयो । स्वर्गदूतहरुले फुक्नको लागि तुरही उठाए अनि जब उनीहरुले फुक्नै लागेका थिए तब येशूले घुँडा टेक्नुभयो र आँसुको साथमा अन्तरबिन्ती गर्न थाल्नुभयो । उहाका हातहरुबाट र शरीरबाट एकदमै ताजा रगत बगिरहेको थियो । उहाँको मृत्यु व्यर्थै नहोस् भनि येशूले पर्मेश्वरलाई भन्नुभयो । किनकि परमेश्वर सन्तहरुको पीडा हेर्न सक्नुहुन्न अनि दुष्टहरुको दुष्ट्याई सहन सक्नुहुन्न । यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो, ‘म अब पृथ्वीका मानिसहरूलाई अन्तिम मौका दिँदैछु’
त्यसपछि येशू स्वर्गदूतहरुतिर फर्कनुभयो र भन्नुभयो, ‘तिमीहरु थुप्रै संख्यामा तल पृथ्वीमा जानु र संसारलाई भन्नुः ‘अन्त्य नजिकै आएको छ, येशू चाँडै आइरहनुभएको छ ।’ पास्टरले डराएर कराउँदै सोधेः ‘सर, तपाईंले यस्तो कुरा कसरी थाहा पाउनुभयो ?’ ती वृद्ध मानिसले जवाफ दिए; संसारमा पठाएका स्वर्गदूतहरु मध्ये म एक हुँ । कृपया, चाँडै यो सन्देश पठाउने काम गर । अब पनि पर्खिरहने समय छैन, कृपया चाँडो गर ! तब ती वृद्ध मानिस हराइहाले ।
दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु यो कथा वास्तविक हो, येशू चाँडै आउँदैहुनुहुन्छ । यसकारण कृपया आजैबाट आत्मा बचाउने काममा लाग्नुहोस् । तपाईंको लागि मैले यो गवाही पोस्ट गरेको छु, अब सुसमाचार प्रचार गर्ने काम तपाईंको हो ! अनन्त जीवनसँग धनसम्पत्तिको तुलना गर्न सकिँदैन ।
Previous: सिन्धुली इसाई एकता समाजको पाँचौ साधारण सभा सम्पन्न
Next: परमेश्वरको वचन जीवित छ, यसले जीवन दिन्छ